राशिफल, वैशाख २ गते बिहीबार - Baikalpikkhabar
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. १८४१ वि.सं. २०७८ साल वैशाख २ गते बिहीबार, १५ अप्रिल २०२१ । राक्षस संवत्सर, चैत्र शुक्लपक्षको तृतीया तिथि १५ः४३ बजेसम्म, उप्रान्त चतुर्थी, नक्षत्र कृतिका २०ः४६ बजेसम्म, उप्रान्त रोहिणी, चन्द्रमाराशि मीन, सूर्योदय ५ः३९ र सूर्यास्त ६ः२६ बजे हुनेछ ।
घरपरिवारको समस्याले गर्दा मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ । जग्गा–जमिनबाट लाभ रहनेछ ।
दूध तथा कस्मेटिकको व्यापार–व्यवसायबाट सोचे अनुरूप लाभ रहला । प्रेमसम्बन्धमा बाँधिनु हुनेछ ।
समयमा आलश्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ । लगानी बढाउने अवसर भने प्राप्त हुनेछ ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । यात्रा सफल रहला । पढाइमा रुचि बढ्नेछ । दिन राम्रो छ ।
राजनैतिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । सरकारी क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ ।
पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । केही खर्च बढ्ला ।
व्यवसायमा लगानी गर्दा प्रशस्त लाभ हुनेछ । पढाइमा सफलता मिल्नेछ । धनलाभ होला ।
घर निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ । प्रेमसम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ ।
व्यापार–व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ होला । प्रेमसम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ ।
मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । दाम्पत्य जीवनमा एक किसिमको निरसता आउन सक्छ ।
वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । पारिवारिक समस्याले गर्दा मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ ।
सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । समय राम्रो देखिन्छ ।
बिहिबार, ०२ बैशाख, २०७८, बिहानको ०८:२० बजे